I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro ifika: Ixabiso kunye neempawu | Iindaba zeGajethi
IHuawei iyaqhubeka nokubetha kwimarike nzima, kangangokuba i I-Huawei Mate 10 kunye ne-Huawei Mate 10 Pro Bafikile benoluhlu olubalulekileyo lweempawu ezintsha ezijolise ekusithabatheni sonke, iya kuba ilahlekile ngakumbi, inkampani yaseTshayina iya ngokuya ivelisa iimveliso ezinobuchule kunye nomgangatho ophezulu.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into malunga entsha I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro, ungaphoswa leli nqaku esiza kukuxelela lona ngexabiso, iinkcukacha kunye nokuba uza kuba nakho nini ukuthenga iiflegi zeHuawei zamva nje ukuba ngaphandle kwamathandabuzo awuyi kushiya nabani na ongakhathaliyo ... ngaba unomdla wokwazi? Sinethemba lokuba kunjalo.
1 I-Huawei Mate 10 VS Mate 10 Pro
2 I-Huawei Mate 10 "encinci" kodwa iyangcungcuthekisa
3 I-Huawei Mate 10 Pro, umahluko
4 Ukuguqulwa kwi-PC ngaphandle kwesidingo sedock
5 Ukuqaliswa kweHuawei Mate 10 kunye namaxabiso
I-Huawei Mate 10 VS Mate 10 Pro
Inkampani yaseTshayina iphehlelele ukubonisa isixhobo "sepro", ivithamin kuphela eyeyona inzima, kwaye iyakumelwa kwiinguqulelo ezinje ngescreen, sikhulu kancinci kodwa ngomlinganiselo ophezulu kunye nesisombululo esiphezulu. Kwelinye icala, siya kufumana i-RAM encinci kunye neqhosha leminwe ngasemva (iHuawei Mate 10 iyigcina ngaphambili), zezona zinto ziphambili umahluko. I-Huawei ngokungathandabuzekiyo ityibilika kuluhlu oluphindwe kabini.
Ikhamera ephindwe kabini, enelensi ebamba umbala omnyama nomhlophe, iya kuqhubeka ukubakho, uphawu lwendlu yaseHuawei eyenze yaziwa le ndlela ikhethekileyo nethe yagqiba ukuthimba wonke umntu.
I-Huawei Mate 10 "encinci" kodwa iyangcungcuthekisa
Esi sixhobo siza kusinika isikrini 5,9 intshi 73rd HD epheleleyo, ngokuqinisekileyo umgangatho njengamaxesha onke, kwimeko engama-77,8 x 8,4 x 150,5 mm ye-186 gram. Ngomfundi wayo weminwe yokufunda ngaphambili kunye neglasi kunye ne-aluminium chassis efanelekileyo.
Ukuhamba uya kufinya IHuawei Kirin 970 uphawu lwendlu, iprosesa eyi-8-engundoqo ekwaziyo ukufikelela kwi-2,8 GHz kwezine zazo kunye ne-2,4 GHz kwezine eziseleyo. Ukugcina isantya kunye nokusetyenziswa akusebenzisi nto ngaphantsi I-4 GB ye-RAM kunye neMali G72Mp12 GPU yee-cores ezingekho ngaphantsi kweshumi elinambini zizonke.
Imemori esemgangathweni iya kuba yi-64 GB ngokwandiswa kwe-MicroSD, siya kuba I-4.000 mAh ibhetri kunye neekhamera ezimbini ezinomtsalane zangasemva ezingama-20 megapixels monochrome + 12 megapixels RGB dual, f / 1.6 + f / 1.6 OIS, flash, 4-in-1 hybrid autofocus Leica SUMILUX-G lens kunye ne-8 MP yekhamera yangaphambili yee-selfies zokunethezeka. Ngokucacileyo ukuxhathisa kwe-IP63 ixhaphake kakhulu namhlanje kunye neenkcukacha, amandla aphindwe kabini eeSIM khadi.
Ngokumalunga nokunxibelelana, zombini kunye ne-LTE Quad Antenna, 4 × 4 MIMO + 256 AM, Cat 18, Wifi, Dual Bluetooth kunye ne-NFC.
I-Huawei Mate 10 Pro, umahluko
Siqala ngotshintsho lokuqala, ipaneli I-OLED kwisisombululo esipheleleyo se-HD esinamandla e-HDR hayi ngaphantsi kweesentimitha ezintandathu. Ukunqongophala kokufunda ngeminwe, inyani kukuba inika isakhelo esincinci kunye nangaphambili, malunga ne-82%. Isebenzisa ubungakanani obuncinci kuneMate 10 yesiqhelo, 74,5 x 7,9 x 154,2 mm, 178 yeegram.
Isixhobo esiphantse safana, iprosesa yeHuawei Kirin 970 esuka endlwini, iprosesa eyisi-8 esisiseko ekwaziyo ukufikelela kwi-2,8 GHz kwezine zazo kunye ne-2,4 GHz kwezine eziseleyo. Olunye utshintsho olubalulekileyo kukuba asisayi kuba nanto ingaphantsi I-6 GB ye-RAM kunye neMali G72Mp12 GPU ingekho ngaphantsi kwee-nuclei ezilishumi elinambini zizonke. Ukugcina kukhula kwakhona, I-128 GB iyandiswa nge-MicroSD.
Olunye utshintsho kukuba kwi I-Huawei Mate 10 Pro siya kuba ne-IP6 ukumelana7, ekwinqanaba eliphezulu kunomntakwabo "omncinci".
Ukuguqulwa kwi-PC ngaphandle kwesidingo sedock
Ukubetha okunzima kwi-Samsung, i IHuawei Mate 10 iya kugxila ngokucacileyo kwezona zibalulekileyo, inokuba yi-PC ngaphandle kwesidingo seDock nge-HDMI-USBC, Ukuba nakho ukusebenzisa ifowuni njengebhodi yezitshixo okanye iphedi yokuchukumisa, uphawu olucacileyo lokuba uHuawei unebhongo ngeprosesa yayo kunye namandla efowuni.
Phantse ngaphambi kokuba ikhompyuter ifihlwe emzimbeni womnxeba, ngaphandle kwamathandabuzo. Ubuncinci ngexesha lenkcazo-ntetho ibijongeka intle.
Ukuqaliswa kweHuawei Mate 10 kunye namaxabiso
IHuawei Mate 10 - ISpain ukususela ngoNovemba 2
699 euro ipinki, i-champagne, umbala omdaka kunye nomnyama.
I-Huawei Mate 10 Pro -Akufumaneki eSpain (Kuphela eFrance, eJamani, e-Itali, eJapan, ePoland, Thailand nase-United Kingdom)
799 euro Uhlobo lwe-128 GB ngwevu, luhlaza, mdaka kunye nepinki ene6 GB ye-RAM ayifumaneki eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro ifika: Ixabiso kunye neempawu